(नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित यो लेख पत्रिकाकै स्वरुपमा हेर्ने भए यहाँ क्लीक गर्नुहोस्,)
काठमाडौं सिरक ओढेर मस्त निद्रामा सुतेको हुन्छ । त्यहि बेला रातको २ बजे महांकाल ,बौद्धमा कलाकारमनुजबाबु मिश्रका आँखा खुलिसकेका हुन्छन् । अनि नियमित रुपमा बाँसका कलम ,ब्रस र रंगहरु सँग खेल्दैपेन्टिङ र स्केच बनाउने उनको कर्म सुरु हुन्छ । जीवनको लामो समय यसरी नै बित्यो मिश्रको ।
दसौं हजार स्केचर त्यति नै संख्यामा पेन्टिङ ले भरिएको छ , मिश्रकला कुटी । केहि समय यता भने स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्नथालेको छ । कामको गति सुस्तरी अघि बढिरहेको छ । आँखा कमजोर हुँदै गएका छन्, स्मरणशक्ति क्षिण बन्दै छ, घर भित्रै हिंडडुल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तैपनि सास रहुञ्जेल सम्म काम गर्छु भन्ने अझैं छ । "अब धेरैमा एक, दुइबर्ष बाँच्छु होला ।" बाँकी जीवन तर्फ नियाल्दै मिश्र भन्छन् । जीवनका ७४ बर्ष पार गरिसकेका मिश्र आफ्नो मृत्युअघि के गर्न चाहलान् ?
आफ्ना आँखा अन्धो ब्यक्तिलाइ दिने र शरीर कुनै इच्छुक अस्पताल लाइ सुम्पिने उनको प्रमुख चाहना छ ।तिलगंगा आँखा अस्पताललाइ आँखा दान गर्ने कुरा कागज पनि गरिसकेका छन् । तर मृत्युको त्यो दिन सबै जनाशोकमा रुन थाल्नेछन्, तिलगंगामा फोन गरेर आँखा झिक्नका लागी कसले डाक्टर बोलाइदेला भन्ने कुरामाउनलाइ चिन्ता छ । आफ्नो शरीर पशुपतिमा जलाउन पटक्कै मन छैन । बरु त्यसको सट्टा कुनै अस्पताललाइदिन पाए धेरै विद्यार्थीहरुले शरीरका अंगहरुबारे सि क्न पाउथे भन्ने लाग्छ । यस बारेमा कसैले चासो दिएका छैनन्। शरीर दान दिने प्रक्रिया निकै जटिल पनि रहेछ । धेरै ठाउबाट स्वीकृति लिनुपर्ने । त्यो झन्झट् गरिरहन अब मनुजबाबुलाइ समय पनि छैन ।
यतिबेला दुइ वटा किताब लेखिरहेका छन्,मनुजबाबुले । आर्ट अफ नन् युरोपियन कन्टि्र, र ग्यान्जे स्कुल अफआर्ट । दुइ वटै कला सम्बन्धिका किताब भएपनि बिषयबस्तुमामा अलिकति भिन्नता छ । पहिलोले अपि|mका रएसिया महादेसहरुमा ५०० बर्ष अघि कलाको अबस्था बारे चित्रित गर्छ । दोस्रो किताबले, तिब्बतको ग्यान्जे भन्नेठाउ जहाँ नेपाली कलाकृति शैलीगतरुपमा अझैं जिवितै छ ,त्यसका बारेमा लेखिदैछ । पेजहरु निकै भइसके तरकमजोर स्वास्थ्य स्थितिका कारण सिद्धिने छाँटकाँट नै छैन । मृत्यु पुर्ब यिं किताबहरु सिध्याउन पाए ठुलै कामगरेजस्तो हुने थियो उनलाइ । आजसम्म आर्जेको,सिकेको ज्ञान धर्तीमा छोडेर जान पाए भोलिको पुस्ताले पढ्नपाउने थियो भन्ने धारणा छ उनको ।
पैसा कमाउन र बिक्रि गर्नका लागि कहिल्यै पेन्टिङ नगरेको बताउछन् मिश्र । हुन त उनका स्केचहरु २५ हजारदेखि ५० हजार सम्म बिक्रि भए । १ लाख देखि १४ लाख सम्मका पेन्टिङहरु बिक्रि भए । विदेसबाट धेरै पटक उतैबस्नका लागि आग्रह नआएका पनि होइनन् । धेरै मौकाहरु आए । "म ज्यादै राष्ट्रबादी मान्छे ,यो देश र माटो छोडेरजाने कल्पना पनि गर्न सक्तिन ।" उनले भने । उनमा माटो प्रतिको माया यति धेरै छ कि ,मृत्युपछि आफ्नो लास आफ्नै बगैंचामा गाडियोस् भन्ने इच्छा छ । "२० फिट गहिरो खाल्डो खनेर मेरो लासपुरिदिनु । त्यस माथी रुख रोपिदिनु । म बिरुवाको रुपमा बाँचिरहनेछु ।" आफ्नो मृत्यु इच्छा बारे मिश्रले चाहनाप्रकट गरे ।
जीवनको ९१ बर्षे उमेर पार गरिरहँदा राष्ट्रकवि माधब घिमिरेको सिर्जना यात्रा अनवरत रुपमा अघि बढिरहेको छ ।जतिखेर पनि कविताकै मुडमा भेटिन्छन् । निरन्तर साहित्य सिर्जनामै तल्लिन छन् । हरेक बिहान पत्रिकापढेर,किताब पढेर समय बित्छ । दिउसो तिर टेलिभिजन हेरेर समय कट्छ । ४ बर्ष भयो महाकाब्य लेख्न थालेकोअझैं पुरा भएको छैन । अब एक बर्षमा पुरा हुन्छ कि भन्ने आश छ । "क्लाइमेक्समा पुगिसक्यो अब एन्टिक्लाइमेक्समा जान्छु ।" घिमिरे भन्छन् ।
घिमिरेले लेखेको पहिलो कविताबैराग्य पुष्प हो, जुन् १९९३ सालको गोरखापत्रमा छापिएको थियो । फुटकररचनामा २००४ सालमा लेखिएको राष्ट्रिय झण्डा ले माधब घिमिरेलाइ चिनायो । र त्यहि सालमा लेखिएकोशोककाब्य गौरी ले उनको उचाइ चुलियो । गौरी कलमको मसिले लेखिएको होइन,आँशुको मसिले लेखिन पुग्यो ।गाउमै छँदा १५ बर्षको उमेरमा उनको बिहे भयो ,जतिबेला उनकि धर्मपत्नि गौरीको उमेर १० बर्ष मात्र थियो । जम्मा१३ बर्षको सहयात्रा पछि एकाएक गौरीले सधैंका लागि घिमिरेको साथ छोडिन् । टाइफाइडले गर्दा उनको इहलिलासमाप्त भयो । गौरीकै सम्झनाले सताउदा यो कृतिको रचना भयो । जुन नेपाली साहित्यमा अत्यन्तै लोकपि्रयबन्यो । स्वयं राष्ट्रकविले आफ्ना अनगिन्ती रचनाहरुको माझमा गौरी शोककाब्य अत्यन्तै रुचाउछन् । तर एकान्तमा यो कृति पढ्न भने सक्तैनन् । यदि पढ्न बसिहाल्यो भने पनि उनका आँखाका परेली भिजिदिन्छन् ।
डाँडापारीको घाम भइसकेको यो बेला लमजुङको बाहुनडाँडाका यादहरु राष्ट्रकविको दिमागमा बर्सिरहन्छन् । पुस्तुनगाउ,बिचमा डाँडो,उत्तरतिर भिरालो ठाउ, मस्र्याङ्दी नदी सुसाइरहेको तस्विर अहिले पनि आँखाभरी आउँछ । त्यहिपरिबेशमा साथीहरु सँग लुकामारी खेल्थे उनी । खुब रमाइलो हुन्थ्यो । थुपैै्र रचनामा जन्मभुमीका सम्झनाहरुपनि पोखेका छन् घिमिरेले । अझैंपनि सपनीमा झल्झली देख्छन् ,आफु जन्मेको पुस्तुन गाउमा पुगेको र त्यहिंकोमाटोमा पाइलो टेकेको ।
घिमिरे सिर्जनामा तल्लिन छन् ,यद्यपि केहि रोगले च्यापिसकेको छ उनलाइ । डायबिटिज र ब्लड प्रेसरको ब्यथालेनिकै सताइरहेको छ । नियमित औषधि सेबनले मात्र काममा सहजनपन ल्याउछ । मनमा कुनै कुराले स्पर्शगर्नुपर्छ त्यसपछि त केहि लेख्न तम्सिहाल्छन् । कल्पनामा आउछन् धेरै चिजहरु र बाँकी कतिपय समाजमा देखेभोगेका कुरा नै लेख्न मन लाग्छ । यतिबेला उनले लेखिरहेको महाकाब्यऋतम्भरा सिध्याउन अझै एक बर्ष लाग्नेअड्कल काटेका छन् । विज्ञान र प्रबिधिले गर्दा संसार एक भइसक्यो । तर मानिसहरु हृदय देखि एक हुनसकिरहेका छैनन् । मनै देखि मानिसहरुलाइ कसरी एक बनाउने ,यसै बिषयमा महाकाब्य लेखिरहेका छन्राष्ट्रकवि ।
समकालिन साथीहरु महाकवि देवकोटा,सिद्धिचरण श्रेष्ठ लगायत चेलाहरु दौलतबिक्रम बिष्ट,रमेश विकल,बासु शसिलगायत अन्यले छोडेको धेरै भइसक्यो । धेरै बाँच्छु भनेर पनि नहुँदो रहेछ ,चाहेर मर्न पनि नसकिने । तैपनिजीवन प्राप्ति लाइ नै ठुलो कुरा ठानेका छन् उनले । जन्म र मृत्यु भगवान्कै हातमा हुन्छ जस्तो लाग्छ उनलाइ ।मृत्युलाइ जीवनको बिश्राम र गहिरो निद्राका रुपमा परिभाषित गर्छन् उनी । "मलाइ मृत्यु देखि डर लाग्छ त्यसैलेत अमर हुन मन लाग्छ ।" लरबरिएको स्वरमा राष्ट्रकविले मुख खोले । मृत्यु अघि के गर्न चाहलान् राष्ट्रकविले ? भर्खरै लेखिरहेको महाकाब्य चाँडो सिध्याउने । र दोस्रो आफुलाइ मुलुकले दिएका दर्जनौ सम्मान्पत्र,पदक कसैलेसंग्रहालयका रुपमा रक्षा गरिदेओस् भन्ने इच्छा छ । यदि अर्को जुनी पाउने भए उनी के बन्न चाहँदा हुन् ? "कविका रुपमा जन्मने । र शास्त्रीय संगित पनि सिक्ने ।" त्यस्तो ठाउमा जन्मन मन छ उनलाइ जहाँ घाम र
जुन लागोस् । त्यहाँ निकै रमाइलो रमाइलो हुन्छ रे ।
८९ बर्षको उमेर पुग्दा पनि नेपालका प्रथम कृषि प्रबिधिज्ञ हुतराम बैद्य बाग्मति बचाउ अभियानमा निरन्तरलागिरहेका छन् । उनका बाल्यकालका धेरै सम्झना जोडिएका छन् बाग्मतिसँग । बाग्मतिमा साथीहरु सँग पौडिखेल्थे,कतले माछा मार्थे । मानिस मर्दा चोख्याउने काम पनि त्यहिं हुन्थ्यो । स्वच्छ,निर्मल थियो पानी ।असन,इन्द्रचोकबाट मानिसहरु नुहाउनका लागी आइपुग्थे । कसैले फोहर गर्दैनथे । ०१६ पछि भने बागमतिको रुपबिग्रदै गयो । त्यसैको संरक्षणमा उनले आफ्नो सिंगो जीवन खर्च गरे ।
त्रिपुरेश्वरस्थित् निवासमा आफ्ना बाँकी जीवनहरु पनि बाग्मति बचाउका लागि नै खर्च गरिरहेका छन् । उनी सँगभएका बौद्धिक कुरा,ज्ञानको प्रयोग गरेर त्यो अभियानमा जुटेका छन् । यतिबेला बैद्यले किताब लेखिरहेका छन् ।जीवनमा भोगेका,देखेका र बाग्मति संरक्षणमा लेखिएको उक्त किताब ७० पेज लामो भइसक्यो । पैसा दिएर एकजना टाइप गर्ने मानिस पनि राखेका छन् । नाम नजुरेको त्यो किताबको बिषयसुचि ९ मा मृत्युको सम्झना शिर्षकछ । जसमा आफ्ना दाजु,नातेदार र धाइ आमाको मृत्यु हुँदा खेरिका प्रसङग समेटिएका छन् । धाइ आमा मर्दा खेरिडर लाग्दो सपना देखेका थिए उनले । "सम्भबत ३ बर्षपछि मलाइ पनि यमदुत बोलाउन आउछ होला । र मैले योसंसार छोड्नुपर्छ ।" आफ्नो बाँकी जीवन तिर र्फकदै बैद्य भन्छन् । आफ्नो मृत्यु अघि उनी के गर्न चाहलान् त ? अहिले सम्म लेखिएका नौ वटा र अब आउनै लागेको पुस्तकबाट उठेको रकमले बाग्मति कोष खडा गर्ने ।क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलाइ छात्रबृत्ति दिने । आफ्ना किताबहरु विद्यार्थीहरुलाइ माझ बाँडिदिने । जसले गर्दा अबकोपुस्ता बाग्मति प्रति सचेत बनोस् र संरक्षणमा जुटोस् ।
६८ बर्ष लागेका पेशाले डाक्टर अञ्जनिकुमार शर्मा श्वासप्रश्वास रोगले पिडीत छन् । हिंड्न पनि गाह्रो भइरहेको छ ।२,३ महिना देखि कम्प्युटर सिकिरहेका छन् उनी । अहिलेको समयमा प्रबिधिको ज्ञान नभए जीवन अधुरो हुन्छभन्ने लाग्छ उनलाइ । यो रिटायर्ड जीवनमा आफन्त,साथी भाइलाइ भेटेर समय बिताउछन् शर्मा । मुलुकका नामचलेका राजनितीज्ञ मनमोहन अधिकारी,तुलसि गिरी,किर्तिनिधि बिष्ट आदिको स्वास्थ्य परिक्षणमा धेरैपटकजुटेका शर्मा यतिबेला स्वास्थ्य सम्बन्धिका केहि किताबहरु पनि सम्पादन गर्दैछन् ।
मृत्यु देखि पटक्कै डराएका छैनन् यिं रिटायर्ड डक्टर । बरु उल्टै छिटो आइदेओस भन्ने पो लाग्छ रे उनलाइ ।साँच्चै मृत्युपुर्ब के के रहरहरु साँचेका छन् उनले ? आफु जन्मेको सिराहाको भालुवाहि हेल्थ पोष्टमा एम्बुलेन्स रऔषधि दिने । धेरै भन्दा धेरै त्यहाको बिरामीहरुको सेवा गर्ने ।
नेपालको पहिलो लाइब्रेरियन महिला हुन् ,बल्खु,काठमाडौंकि शान्ति मिश्र ७० । ०१९ सालमा त्रिभुबनविश्वविद्यालयमा इतिहास पढाउथिन् शान्तिले । त्यहि बेला अमेरिका गएर पुस्तकालय विज्ञान बिषयमा एमएपनि गरिन् । नेपाल फर्किएर त्रिभुबन विश्वविद्यालयमा संस्थागत रुपमा पुस्तकालय सुरु गर्न निकै समस्या परेकोथियो । किताबहरु जुटाउन बिभिन्न ब्यक्तित्व,शिक्षा मन्त्रि, राजदुताबासमा धाएकि थिइन् । पछि देशकै ठुलो रभब्य पुस्तकालय बनेपछि नेपालका गन्य मान्य ब्यक्ति डिल्लीरमण रेग्मी,हर्क गुरुङ,मनमोहन अधिकारी, शेरबहादर देउबा,केपी ओली हेर्नका लागी आइपुगे । बिदेसबाट समेत थुप्रै शिक्षाविदहरुले शान्तिलाइ भेटेर उनकोकामको प्रशंसा गरेका थिए ।
शान्तिलाइ चिनाउने धेरै परिचय छन्, उनी प्राध्यापक,लाइब्रेरीयन र लेखक हुन् । एक मात्र छोरी प्रज्ञा अमेरिकाछिन् । श्रीमान् नारायण सँगै आफ्ना बाँकी दिनहरु सिर्जनामै बिताइरहेकि छिन् । फुर्सदमा गीत संगितसुन्ने,बगैचामा फुलेका फुलहरु हेर्ने,चरा उडेको हेर्ने, बगैचामा डुल्ने काम गर्छिन् । संसार छोड्नु अघि शान्तिले केगर्न चाहलिन् ? "मुलुकका सबै जिल्लामा पुस्तकालय खोल्ने र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागी छात्रबृत्तिदिने ।"
नेपालको पहिलो राजनीतिक दल खोल्ने व्यक्तिमध्येमा पर्छन्, रामहरि शर्मा, ९४ । धर्मभक्त माथेमा, जीवराजशर्मा, टंकप्रसाद आचार्य र दशरथ चन्दहरूसँग मिलेर शर्माले नेपाल प्रजापरष्िाद् बनाएका थिए ।राणाशासनविरुद्ध संघर्ष गर्दा १० वर्ष केन्द्रीय कारागारमा बिताए उनले । उनी ब्राह्मण भएकाले मात्र मृत्युदण्डबाटजोगिएका थिए । उनीसँगै राणाशासनको विरोधमा लाग्ने चार जना त सहिदै भए ।
जनताको बलले समुन्नत र सबल देश बनाउने लडाइँ लडेका शर्माको शरीर निकै कमजोर हुँदै गइसक्यो । आँखादेख्न सक्दैनन्, जीउ दुख्छ । घरबाहिर जान सक्ने स्िथति नभएकाले प्रायः बिछ्यौनामै भजन सुनेर समयबिताइरहेका छन् । संसारबाट बिदा लिनुअघि उनको इच्छा के होला ? भन्छन्, "इतिहासका लेख्न बाँकी धेरै कुराछन् मसँग । कोही लेख्ने मान्छे पाए सबै कुरा बताउने मन छ ।"